ေအာင္ျမင္ခ်င္ပါသလား?? သူတို႔ကို နားမေထာင္ပါနဲ႔ – Gentleman Magazine
တစ်ချိန်တုန်းကဆိုရင် ကျွန်တော်ဟာ အတိုင်ပင်ခံတွေထားပြီး ဒေါ်လာ သောင်းပေါင်းများစွာ သုံးပြီးတော့ သူတို့ပြောတဲ့ ” အောင်မြင်မှု လမ်းမှန်” ကို သွားခဲ့ပါတယ်။ သူတို့က တခြားသူတွေ သွားခဲ့တဲ့ နည်းလမ်းတွေကို ပြောပြတာပါ။ တခြားသူတွေလို ကြော်ငြာပါတယ်။ တခြားသူတွေလို အဝတ်အစား ကောင်းကောင်း ဝတ်ပါတယ်။ တခြားသူတွေလို Marketing လုပ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် မကြာသေးခင်မှာတော့ သူတို့နည်းလမ်းတွေအတိုင်း လုပ်ခဲ့တာကို ရပ်လိုက်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အဲ့ဒါဟာ ကျွန်တော့်နည်းလမ်း မဟုတ်လို့ပါပဲ။
တခြားသူတစ်ယောက်ယောက်က သင့်ကို အောင်မြင်အောင် ဘာလုပ်ရမယ်၊ ညာလုပ်ရမယ် ပြောလာရင် သူတို့ကို ပါးစပ်ပိတ်နေခိုင်းလိုက်ပါ။ သင်က သင့်သမိုင်း သင်ရေးနေတာပါ။ သင်က သင်ကိုယ်တိုင် ဖြစ်နိုင်တဲ့ခေတ်မှာ တခြားသူတစ်ယောက်ရဲ့ ကိုယ်ပွား အဖြစ်မခံပါနဲ့။
သင်က ဘယ်သူလဲ? သင် ဘာလုပ်ချင်တာလဲ? ဘယ်နေရာကို သွားချင်တာလဲ? သင့်ပန်းတိုင်က ဘာလဲ? အဲ့ဒိအချက်အလက်တွေနဲ့ အကြံပေးသူတွေ သင့်ကို ပြောပြတဲ့ အောင်မြင်မှု ပုံပြင်တွေနဲ့ ဘယ်လောက် ဆက်စပ်နေသလဲ? ဖြေကြည့်ပါ။
ကျွန်တော့်အတွက်ဆို ကျွန်တော် စီးပွားရေး လုပ်သမျှဟာ ကျွန်တော့်ကို ကျေနပ်စေနိုင်တဲ့ အချက်အလက် သုံးခုကြောင့်ပါပဲ။ ကိုယ့်ငွေ ကိုယ်ရှာနိုင်တဲ့ စွမ်းအား ရှိတယ်၊ စီးပွားရေး ကြီးထွားလာမယ်၊ အဲဒီလို ကြီးထွားလာတာ ကြည့်ရတာ ပျော်တယ် တို့ပါပဲ။ အဲဒိအချက်တွေနဲ့ ကျွန်တော် သွားချင်တဲ့နေရာကို ဆုံးဖြတ်တာပါ။ အဲဒိအချက် သုံးချက်ထဲက နှစ်ချက် ကိုက်ညီနိုင်တဲ့ လုပ်ငန်းဆို ကျွန်တော် လုပ်ပါတယ်။ တစ်ချက်ထဲ ကိုက်ရုံနဲ့ ငွေဘယ်လောက် ရရ မလုပ်ပါဘူး။
အဲ့ဒါကြောင့် သင့်ကို ဘာကပျော်စေလဲ ဆိုတာကို သိအောင် ရှာပြီး သင်ကိုယ်တိုင် စိတ်ကျေနပ်တဲ့ အချက်အလက်တွေ ထုတ်ပါ။ အဲဒါက ဘာကြောင့် အရေးကြီးလဲဆိုတော့ ကျွန်တော် ကျွန်တော့်ရဲ့ အချက် သုံးချင်နဲ့ မကိုက်တဲ့ လုပ်ငန်း လုပ်မိတိုင်း အရှုံးနဲ့ပဲ ရင်ဆိုင်ရလို့ပါ။
သင် ရောင်းနေတာ ဘာလဲ?? လူတိုင်းဟာ တစ်စုံတစ်ခုတော့ ရောင်းနေတာချည်းပါ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ ရောင်းနိုင်တဲ့ထဲက အကောင်းဆုံး အရာကတော့ သင့်ရဲ့ ထုတ်ကုန်ကို ပိုပြီး သမိုင်း အရှိန်အဝါ ကြီးကြီး မားမားနဲ့ ရောင်းဖို့ပါပဲ။
Domino ဟာ ပီဇာ မရောင်းပါဘူး။ ဆာနေတဲ့ ကျောင်းသားတွေ၊ ပင်ပန်းနေတဲ့ အလုပ်သမားတွေအတွက် အမြန်စာ ရောင်းတာပါ။ Apple က ရောင်းနေတာ စမတ်ဖုန်းတွေ မဟုတ်ပါဘူး။ လူမှုရေး အသိုင်းအဝိုင်းမှာ ပိုဝင်ႂ့ကွားစေမယ့် ပန်းသီးတံဆိပ် ရောင်းတာပါ။
ကျွန်တော့်နည်းလမ်းဟာ ကျွန်တော့်အတွက်တော့ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ ကျွန်တော်ဟာ ကျွန်တော့်သမိုင်းကို ရေးနိုင်တဲ့ပုံစံနဲ့ ကျွန်တော် ရေးချင်တာကို ရေးနေတာပါပဲ။ ကျွန်တော့်ကို တားမြစ်နေတဲ့ တစ်ခုတည်းသောအရာက ပါတ်ဝန်းကျင်က ပြောနေကြတဲ့ ” ဒီလိုမလုပ်နဲ့၊ ဟိုလူတောင် ဟိုလိုလုပ်လို့ ချမ်းသာတာ၊ ဟိုလိုလုပ်ပါလား” ဆိုတဲ့ စကားတွေပါပဲ။ အဲ့ဒိ စကားတွေကိုသင့်စီးပွားရေးကို သင့်ဘာသာ ပုံစံသစ် တည်ထောင်ခြင်းကနေ တားဆီးခွင့် မပေးလိုက်ပါနဲ့။
Previous: အျပာကားစြဲလမ္းမႈျပႆနာ အေျဖရွာ
Next: သင္မသိေသးတဲ့တစ္မိနစ္အတြင္း က်န္းမာေရးပိုေကာင္းလာေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ား